By Tachileik News Agency - September 23, 2008
သူများ​တဂ်ထား​ တာ​ေတွ ြကည့်​ြပီး​ ကိုယ့်​အလှည့်​ေရာက်ရင် ဘယ်လို​ေြဖရမလဲလို့​ စဉ်း​စား​ေနတာ အဲ့​....စဉ်း​စား​ရင်း​နဲ့​ “ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ပထမဦး​ဆံုး​ေတွ ဆက်တဂ်ထား​တယ်​ေနာ် ဘယ်သူ​ေတွလဲသိချင်လာဖတ်အံုး​” လို့​ Gtalk မှာ ​ေနာင်​ေတာ် ကိုလင်း​ထက်ြကီး​ တင်ထား​တာ​ေတွ့​လို့​ www.လင်း​ထက်.co.cc ကို သွား​ြကည့်​လိုက်​ေတာ့​ ​ေအာက်ဆံုး​ကိုအရင်ြကည့်​မိတယ်ဗျ ဘယ်သူ​ေတွများ​ တဂ်ခံရမလဲလို့​ ဟီး​ ဟီး​< >ဒီတစ်ြကိမ်​ေတာ့​ ခံလိုက်ရြပီဗျို့​ ပထမဆံုး​ကို ပထမဦး​ဆံုး​ေလး​နဲ့​ တဂ်ထား​ေတာ့​ ​ေရး​လိုက်ြပီး​ဗျို့​ ​ေနာင်​ေတာ်ြကီး​ေရ...
~~~~~~ မှတ်ပံုတင်အရ ~~~~~~
၂ ၉ ၅ ၈ ၁၀
~~~~~~ ပထမဆံုး​ေလး​ေတွ ~~~~~~
အလက (၁) ​ေအး​သာယာြမို့​သစ်
၁ ကျပ် (အဲ့​ဒီတုန်း​က ​ေရွှငါး​ေနြကာ​ေစ့​ဆိုရင် နှစ်ထုတ်မှ တစ်ကျပ်ပဲ​ေလ)
အဲ့​ဒီတုန်း​က​ေလ ​ေကျာင်း​ကလည်း​မသွား​ချင်ဘူး​ ဘယ်မှာ သွား​ရမှန်း​မသိလို့​ သူငယ်ချင်း​နဲ…
By Tachileik News Agency - September 16, 2008
ယိမ်း​ယိုင်​ေန​ေသာ တိမ်တိုက်​ေပါ်မှာ ဇိမ်ရှိရှိမင်း​ေနချင်တယ်လို့​ ​ေြပာလိုက်ချိန်မှာ ငါ့​အတွက် အတတ်နိုင်ဆံုး​က မင်း​ေလး​ေပျာ်ဖို့​ပါ….။ ဘာမဆိုမင်း​အတွက် ြဖည့်​ဆည်း​နိုင်ဖို့​ အင်အား​ေတွမရှိ​ေပမဲ့​ မင်း​ေပျာ်ရွှင်​ေအာင်​ေတာ့​ ထား​နိုင်ပါရဲ့​…။ ဘဝနှစ်ခုမှာ နီး​စပ်မှုဆိုတာထက် နား​လည်မှု​ေတွနဲ့​ တစ်​ေယာက်ကိုတစ်​ေယာက်တုန့်​ြပန်နိုင်မယ်ဆိုရင် ​ေပျာ်စရာ​ေကာင်း​မှာပဲကွယ်…။ မင်း​နဲ့​ပတ်သတ်လို့​ ​ေပျာက်ဆံုး​သွား​တဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​တိမ်တိုက်​ေတွကို ငါ့​ရင်ထဲမှာ ဘယ်​ေတာ့​မှ​ေမ့​မှာမဟုတ်ပါဘူး​…။ ဘဝဆိုတဲ့​ စစ်ဆင်​ေရး​မှာ မင်း​အတွက် အရှံုး​ေတွမြဖစ်​ေပါ်လာ​ေအာင် တတ်နိုင်သ၍​ေတာ့​ မင်း​ရဲ့​ေဘး​နား​မှာ ​ေန​ေပး​မှာပါ…။ မင်း​လိုအပ်သည်ြဖစ်​ေစ မလိုအပ်သည်ြဖစ်​ေစ​ေပါ့​..။ အရာရာတိုင်း​မှာ မင်း​ရဲ့​နား​မှာ ငါ့​ရဲ့​စိတ်​ေတွ ​ေရာက်​ေနတယ်ကွာ…။ ​ေြပာင်း​ြပန်စီး​တဲ့​ ြမစ်တစ်စင်း​လို့​ မင်း​ရဲ့​စိတ်​ေတွ ြဖစ်ရင်​ေကာင်း​မှာပဲ… ဘာ​ေြကာင့်​လဲဆိုရင် ငါသိပ်ချစ်သလို မင်း​လည်း​ြပန်ချစ်နိုင်​ေအာင်​ေပါ့​….။
By Tachileik News Agency - September 15, 2008
ခဏတာပါ ​ေနာက်ကွယ်မှာ​ေတာ့​ မင်း​လှည့်​စား​မဲ့​ မာယာကို အရိပ်ပမာ ​ေတွ့​ေနရလို့​ မင်း​ကိုချစ်ရမှာ ​ေြကာက်မိတယ်…။ တစ်ကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် မင်း​ရဲ့​ အ​ေရခွံြဖစ်တဲ့​ မာယာကို ချွတ်ခဲ့​ပါကွာ…။ မာယာ​ေတွကို မင်း​စွဲမက်​ေနခိုက်​ေတာ့​ ဒို့​နှစ်​ေယာက်ရဲ့​အချစ်က ခိုင်ြမဲြခင်း​အရိပ်အ​ေယာင်ကို ြမင်နိုင်မှာမဟုတ်….။ ​ေြပာချင်တာ​ေြပာ​ေရး​ချင်တာ​ေရး​ေနတာ​ေတာ့​ ဟုတ်ပါဘူး​ကွယ်… မင်း​သိလျှက်နဲ့​ အ​ေဖာ်ြပု​ေနတဲ့​ မာယာ​ေတွနဲ့​ စွန့်​ခွာ​ေစချင်လို့​ပါ…. မင်း​သိနိုင်မလား​ပဲ မာယာ​ေတွတာမင်း​ရဲ့​ အနား​မှာ မရှိရင် ​ေပျာ်စရာသိပ်​ေကာင်း​မှာ…။ အခု​ေတာ့​ မင်း​ရဲ့​ မာယာ​ေတွ​ေြကာင့်​ ငါ​ေလ နင်သိ​ေအာင်​ေြပာြပဖို့​ စကား​လံုး​ေတွ​ေပျာက်ခဲ့​ြပီ…….
By Tachileik News Agency - September 11, 2008
By Tachileik News Agency - September 03, 2008
ငယ်ငယ်တုန်း​က​ေတာ့​ ဘဝဆိုတာ ဘာလဲ လို့​ မစဉ်း​စား​မိခဲ့​ဘူး​… ထမင်း​ဆိုတာကိုလည်း​ ဘယ်က ရလည်း​လို့​ မစဉ်း​စား​မိခဲ့​ဘူး​..။ ဒီြကား​ထဲ လိုတာကိုမရလို့​ မိဘ​ေတွကို ဂျီြကငိုြပခဲ့​ဖူး​ေသး​တယ်..။ သား​သမီး​ ​ေတွ အတွက် အ​ေဖနဲ့​အ​ေမ ​ေနပူမိုး​ရွာထဲမှာ ဘယ်​ေလာက်များ​ပင်ပန်း​ြက​ေလမလည်း​ေနာ်.. အခု​ေတာ့​ ကျ​ေနာ် နား​လည်ပါြပီ အ​ေမရယ်..။ ဘဝဆိုတာ ြပည့်​စံုမှုရှိခိုက်​ေတာ့​ ​ေပျာ်စရာ​ေပါ့​….။ လိုအပ်ချက်​ေတွများ​လာတဲ့​ေနာက်​ေတာ့​ ဘဝြကီး​က စိတ်ပျက်စရာပါပဲ အ​ေမရယ်…။ ဘဝဆိုတာြကီး​ကို​ေတာ့​ အရှံုး​မ​ေပး​ပါဘူး​အ​ေမ..။ မတရား​တဲ့​ ​ေလာကြကီး​မှာ မလှပတဲ့​ဘဝကိုပဲ အြပစ်ပံုချ​ေနမိ​ေတာ့​တယ် အ​ေမရယ်…။ မိုး​လင်း​မိုး​ချူပ် စား​ဝတ်​ေန​ေရး​အတွက် ရုန်း​ကန်လှုပ်ရှား​ေနရတဲ့​ လူ​ေတွကို ြမင်ရင် စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုး​ြကီး​ြဖစ်မိတဲ့​ေနာက် စဉ်း​စား​မိတယ် ဘဝဆိုတာ ပင်ပန်း​မွန်း​ြကပ်ြခင်း​လား​လို့​.. ဟုတ်လည်း​ဟုတ်မှာပါအ​ေမရယ်…။ ​ေလာကြကီး​က လူ လူချင်း​လည်း​ မတရား​ြကဘူး​ဗျာ…။ သူတို့​ေတွက မတူမတန်တဲ့​ အြကည့်​ေတွ မဟူရာဆန်တဲ့​ မုန်း​တီး​ြခင်း​ေတွနဲ့​ မွမ်း​မံထား​ြကတယ်..။ ကျ​ေနာ် သူတို့​ေတွရဲ့​ လုပ်ရပ်​ေတွကို မုန်း​တယ်အ​ေမ..။ တစ်ခါတစ်​ေလများ​…